Iincwadi zeFrench Revolution
Isihluzi se-French Revolution #1
Isihluzi se-French Revolution #2
Isihluzi se-French Revolution #3
Isihluzi se-French Revolution #4
Isihluzi se-French Revolution #5
Isihluzi se-French Revolution #6
Amaxwebhu oHlaziyo lwaseFrance
Imibuzo yesiFrentshi soVavanyo
Inguqulelo yamaFrentshi yohlaziyo lwe-French AK
I-French Revolution glossary LZ
Imizobo yesiFrentshi yoVavanyo
Imbali yaseFrance yoQhushululu
Imephu zoQhushululu lwaseFrance
Umbuzo wememori yesiFrentshi yohlaziyo -Iziganeko 1789-91
Umbuzo wememori yesiFrentshi yohlaziyo -Iziganeko 1792-95
Umbuzo wememori yesiFrentshi yoVuselelo-izehlo eziya kwi1788
Imibuzo yememori yesiFrentshi yamaQela - amaqela
Imibuzo yememori yesiFrentshi yoVavanyo-izimvo
Umbuzo wememori yesiFrentshi-iinkokeli
Imibuzo yememori yesiqhelo yase-French - imigaqo (I)
Imibuzo yememori yesiqhelo yase-French - imigaqo (II)
Imibuzo yememori yesiqhelo yase-French - imigaqo (III)
Kwimemori ye-French Revolution
Imibuzo yemvukelo yaseFrance #1
Imibuzo yemvukelo yaseFrance #2
Imibuzo yemvukelo yaseFrance #3
Imibuzo yemvukelo yaseFrance #4
Imibuzo yemvukelo yaseFrance #5
Imibuzo yemvukelo yaseFrance #6
Imibuzo yemvukelo yaseFrance yabaqalayo
Izihloko zeFrench Revolution
I-French Revolution trivia
Inguquko yesiFrentshi ngubani
Isivuseleli isiFrentshi isihluzi-magama
Isihluzi sesiFrentshi seRevolution-imicimbi
I-French Revolution izwisearch - abantu
Isihluzi seFrench Revolution - indawo
Amagqabantshintshi e-French Revolution
Molweni msebenzisi we-adblock…
Kubonakala ngathi ulahlekile kancinane…
I-French Revolution phantse yonke into esiyidibanisa novukelo-imikhosi yokuqhekeza, iingxwabangxwaba ezikrelekrele, irhafu ephezulu, ukuvuna okungaphumeleliyo, ukunqongophala kokutya, abantu abalambileyo abalusizi, abantu abathandanayo, ubuxoki, ubuqhetseba, ubundlobongela, isigebenga, ubugqi kunye nokunyanzela urhulumente kunye noomatshini bokucheba intloko.
Nangona ingesiyo eyokuqala inguquko yexesha lanamhlanje, inguquko yaseFrance iye yaba ngumlinganiso apho ezinye iimvukelo zilinganiswe khona. Isiphithiphithi kwezopolitiko nakwezoluntu nge18th yenkulungwane yeFrance ifundwe zizigidi zabantu - ukusuka kwizifundiswa ukuya kwizikolo eziphakamileyo. I isaqhwithi seBastille ngoJulayi 14th 1789 uye waba yenye yeendlela ezichazayo zembali yaseNtshona, isisusa esigqibeleleyo sabantu sokuguqula. Amadoda nabafazi belizwe laseFrance elihlaziyiweyo - ULouis XVI, Marie Antoinette, UMarquis de Lafayette, Hlonipha uMirabeau, IGeorges Danton, UJean-Paul Marat, Ubuninzi beRobespierre kwaye abanye -fundisisiwe, bahlaziywa, kwaye batolikwe. Iimbali Uchithe ngaphezulu kweenkulungwane ezimbini kuvavanywa uHlaziyo lwaseFransi, bezama ukugqiba ukuba ingaba yinto eqhubayo na inkqubela okanye inzala ebarbarism.
Ukuqala kokujonga, izizathu zoHlaziyo lwaseFransi zibonakala zichanekile. Ngasekupheleni kwenkulungwane ye-18, abantu baseFrance banyamezele amakhulu eminyaka yokungalingani kunye nokuxhaphaza. Isikhundla esikhoyo sezolawulo esidingekayo Indawo yesithathu, abaqhelekileyo kwisizwe, ukwenza umsebenzi wabo ngelixa bethwele umthwalo werhafu. Ukumkani wayehlala yedwa e-Versailles, yakhe urhulumente wasebukhosini i-thethantist kwithiyori kodwa ayisebenzi ekuyinyani. Icandelo lolawulo-mali lesizwe lalingenanto, lagqitywa kukuphathwa gwenxa, ukungasebenzi kakuhle, urhwaphilizo, inkcitho enkulu kunye nokuthatha inxaxheba kwiimfazwe zamanye amazwe.
Ngasekupheleni kwe-1780s, abaphathiswa benkosi babefuna ngamandla ukwenza uhlengahlengiso lwemali. Oko kwaqala njengengxabano malunga notshintsho lwerhafu olucetywayo kungekudala kwangena umbutho kwibutho lezopolitiko nakwezomgaqo-siseko. Ukujongana Amazwe jikelele embindini we-1789 kukhokelele ekusekweni kweNdibano yesiZwe, eyokuqala yoorhulumente abaliqela beguqukayo. Ezi ziganeko, ngaphandle kwezisongelo okanye ukuphalazwa kwegazi, zacebisa ukuba utshintsho olunamandla ngamandla lunokwenzeka. Kwiiveki ezizayo, igagasi lodlame oludumileyo- eParis, emaphandleni kwaye eVersailles ngokwayo - ibhalwe kuguquko lwe bloodier ezayo.
Iwebhusayithi yeAlfa History yeRevolution yaseFrance sisixhobo esikwincwadi esemgangathweni esemgangathweni yokufunda ngeziganeko eFransi kwi1700s esekupheleni. Inemithombo engaphezulu kwe-500 eyahlukileyo kunye yesibini, kubandakanya neenkcukacha izihloko ezizihloko, amaxwebhu kwaye Izimvo zomzobo. Iwebhusayithi yethu inezinto zokubhengeza ezifana iimephu kwaye iimephu zengqondo, amaxesha abekiweyo, Iglosari, i 'ngubani' kunye nolwazi kwi imbali kwaye ngembali. Abafundi banako ukuvavanya ulwazi lwabo kwaye bakhumbule ngothotho lwezinto ezenziwa kwi-Intanethi, kubandakanya Imibuzo, amagama anqamlezayo kwaye ukujonga amagama.
Ngaphandle kwemithombo ephambili, yonke imixholo kwiAlfa imbali ibhaliwe ngootitshala abaqeqeshiweyo, ababhali kunye nembali. Ulwazi oluninzi kule webhusayithi kunye nabanegalelo kunokuba fu maneka apha.
Ngaphandle kwemithombo ephambili, yonke imixholo kule webhusayithi © Imbali ye-2018-19. Lo mxholo awunakukopishwa, upapashwe ngokutsha okanye usasazwe ngokutsha ngaphandle kwemvume ecacileyo yezeMbali yeAlfa. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokusetyenziswa kwewebhusayithi yeAlfa yeMbali kunye nomxholo, nceda ubhekise kuthi Imigaqo yokuSebenzisa.
Khangela le ndawo:
Izinto ezingaqhelekanga zangaphambili
Le ndawo yeRevolution yesiFrentshi inamanqaku, imithombo kunye nembono yeziganeko eFrance phakathi kwe1781 kunye ne1795. Indawo le yenziwa kwaye yagcinwa yi-Alfa Imbali. Inamagama e-228,547 kumaphepha e-353 kwaye yagqitywa ukuhlaziywa ngoJulayi 31st 2019. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela iphepha lethu le-FAQ okanye Imigaqo yokusetyenziswa.